Inona ilay Kardinaly
jeudi, 12 juillet 2018 18:31
Misy antanatohatra eo amin'ny Fiangonana Katolika.
- Ny Petra na Mopera no misahana ny Paroasy na ireny fiangonana hitantsika eo anivon'ny Fokontany ireny;
- Ny Eveka no misahana ny Diosezy, na région raha ampitovitoviana amin'ny rafi-panjakana. Ny Cathédral no paroasy sahanin'ny Eveka.
- Ny Pape misahana ny Diocèse de Rome.
Tsy mifampitsabaka andraikitra ireo, na dia manana fahefana ihany aza ny Pape.
Ny Arseveka, dia Eveka iray misahana fandrindrana Diosezy maromaro na ilay hoe Archidiocèse.
Ny Pape manana ny Diocèse de Rome hiandraiketany, ny Eveka tsirairay ihany koa samy manana ny Diocèse-ny.
Ny Pape no manendry ny Pretra ho lasa Eveka, sy manondro izay Diosezy iandraiketany na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Ny Eveka kosa no manamasina sy manendry ny Pretra hiasa amin'ny toerana izay anendreny azy.
Eo amin'ny Fiangonana Katolika, dia tsy misy Pretra, na Eveka mamaly izay toerana anendrena azy. Io ilay voadin'ny Fanekena nataony rehefa amasinina izy.
Ny Mpino Katolika ihany koa tsy misy mahazo mitaky na tsy manaiky izay fenendrena Pretra na Eveka iray.
Ny Katolika, izay Fokontany hipetrahany no tsy maintsy Paroasiny. Tsy misy izany Katolika hoe mipetraka amin'ny Fokontany iray ka hisafidy hijanona any amin'ny Fokontany taloha nipetrahany. Afaka mivavaka amin'izay toerana tiany izy, fa ny momba azy rehetra dia ao amin'ny Paroasiny ihany, na hanao Batemy, na hanao Mariazy, na maty.
Raha misy ny fitiavana manokana hanao Batemy na Mariazy any amin'ny Paroasy hafa, dia mangataka alalana amin'ny Pretran'ny Paroasy misy azy, ary tsy ho raisin'ilay Mopera hafa mihitsy raha tsy misy io alalana nomen'ilay Pretra na Curé nisy azy io.
Ny Kardinaly dia ny Pape no manendry azy, matetika dia amin'ireo Eveka no tendreny ho Kardinaly. Ny Kardinaly dia mpiara-miasa akaiky amin'i Pape, afaka mifidy sy azo fidiana ho Pape izay Kardinaly latsaky ny 80 taona. 120 eo ireo Kardinaly maneran-tany latsaky ny 80 taona.
Ny Eveka, Kardinaly, Pape dia mandra-maty fa tsy misy mandat. Afaka maka retraite kosa izy raha tiany izany. Ohatra, ny Pape Jean Paul 2 dia maty vao nosoloina. Ny Pape Benoit XVI kosa dia mbola velona, naka retirety nosoloan'i Pape François.
Evêque Emérite, no hiantsoana ny Eveka maka retraite rehefa feno 75 taona. Mahazo mangataka ny hanohy miasa hatramin'ny faha 78 taona kosa ny Eveka iray.
Ny Kardinaly izany tsy ambonin'ny Eveka hafa, fa andraikitra fotsiny ihany.
Ny Kardinaly Désiré Tsarahazana izao dia mbola mitazona ny Diocèse Toamasina, no sady Arsevekan'ny Toamasina, no mbola mitazona ny maha Filohan'ny Conférence épiscopale azy, izay ivondronan'ireo Eveka rehetra eto Madagasikara, io dia mandat, ka io Président n'ny conférence épiscopale io no Filohan'ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara. Miovaova io izany.
Raha ny vaovao izao dia notendren'i Pape ho Président du Synode des Évêques Catholiques d'Afrique ny Cardinal Désiré Tsarahazana. Nefa izy amin'ny maha Cardinal azy dia miandraikitra Fiangonana any Rome miaraka amin'i Pape ihany koa.
Mazava ho azy, fa raha ireo andraikitra marobe vao nomena azy ireo, dia mety ho hisy Eveka mpanampy izany ny Diocèse Toamasina, izay ny Pape ihany no manapaka an'izay.
Raha tsikaritratsika tamin'ny fandraisan'ny Diosezin'Antananarivo ny Kardinaly tao Antanimena dia ny Arseveka Odon Razanakolona sy ny Nonce no nihaloha lalana ny Kardinaly, izany hoe nanetry tena i Mgr Odon Razanakolona nanome voninahitra an'i Kardinaly hitarika ny Sorona Masina, sy hitondra ilay Tehina, fa i Mgr Odon Razanakolona tsy nitondra tehina, nefa eto amin'ny Diosezy iadidiany.
Izay no antony tsy nanaovana lanona lehibe fandraisana an'i Cardinal teto Antananarivo, satria tsy Dioseziny eto Antananarivo fa any Toamasina izy no ho raisina amin'ny fomba manetriketrika amin'ny Alahady izao. Fa fanajana ny Diosezy izay nandolovany sy hanomezana voninahitra ireo mpitondra Fanjakana eto Antananarivo dia nasiana iny fandraisana tsotra tao Antanimena iny.
Ny Nonce Apostolique kosa, raha ordre protocolaire no resahina dia eo ambanin'ny Cardinal satria ny Nonce dia Eveka misolo tena ny Pape, nefa ny Cardinal dia mpanolotsaina sy mpiara-miasa akaiky ny Pape. Fomba maneran-tany anefa dia ny Nonce Apostolique no atao Doyen du Corps diplomatique. Arak'izany, dia mandeha aloha ny Cardinal, ny Nonce, izay sady Doyen du Corps diplomatique, vao misesy ny Ambassadeurs arakaraky ny daty sy ora nanolorany ny taratasy fanendrena azy (Présentation de la lettre de créance).
Manao ilay satroka sy fehikibo voloparasy ny Eveka, ny Kardinaly manao akanjo mena, fehikibo mena, sy satroka mena. Mena toy ny ran'i Jesoa Kristy, manaiky sy mahafoy ny ainy ho an'ny Fiangonana.